Vaovao - Inona avy ireo electrodes stick?
Inona avy ireo electrodes stick?
Ny electrode welding dia tariby metaly miaraka amina fonosana simika. Ny tsorakazo dia ampiasaina mba hanohanana ny arc welding ary hanomezana ny metaly famenoana takiana mba hampidinina ny mpiray. Miaro ny vy amin'ny vy ny vy, mampiorina ny arc ary manatsara ny vy. Ny savaivon'ny tariby, kely kokoa ny firakotra, dia mamaritra ny haben'ny vy vy. Izany dia aseho amin'ny ampahan'ny hakiho iray toy ny 3/32 ″, 1/8 ″, na 5/32. ” Ny kely kokoa ny savaivony dia midika fa mitaky kely kokoa ny vanim-potoana ankehitriny ary mametraka metaly famenon-keloka kely kokoa izy.
Ny karazana vy metaly amboarina, ny fizotran'ny fantsona sy ny masinina ary ny fepetra hafa dia mamaritra ny karazana fantsom-by ampiasaina. Ohatra, ny karbaona ambany na ny "vy malefaka" dia mitaky tehina vy malefaka. Ny vy vy, aliminioma na varahina dia mitaky tehina sy fitaovana hafa.
Ny firafitry ny flux amin'ny electrodes dia mamaritra ny fomba fiasa mandritra ny fizotran'ny welding. Ny sasany amin'ireo firakotra sy ny fluks mirehitra dia mamorona setroka ary manao ampinga manodidina ny "pisinina", mba hiarovana azy amin'ny rivotra manodidina azy. Ny ampahany amin'ny flux dia miempo sy mifangaro amin'ny tariby ary avy eo dia manaparitaka ny loto amin'ny tany. Ireo maloto ireo dia fantatra amin'ny anarana hoe "slag." Ny lasitra vita dia ho mora malemy sy malemy raha tsy ny flux. Rehefa mangatsiaka ny tonon-tariby dia azo esorina ilay tazo. Ny tantanana sy ny borosy tariby no ampiasaina hanadiovana sy handinihana ny lasitra.
Ny electrodes welding vy-arc dia azo sokajina ho elektroda tsy mitanjaka, elektroda mifono hazavana, ary arc mifono vy na elektrôna mavesatra mifono. Ny karazana ampiasaina dia miankina amin'ny fananana manokana takiana ao anatin'izany: fanoherana ny harafesina, fikojakojana, tanjaka avo lenta, ny karazana metaly ifotony tokony hodiovina; ary ny toeran'ny lasitra izay fisaka, marindrano, mitsivalana na ambony.
electrode welding, Kavina vy 1.5 Mm, Tsorakazo vy tsy mitovy, Ss Welding Electrode, vy vy, Atsofohy vy vy vy,